Fanafihana mitam-piadiana - ewa.mg
News - Fanafihana mitam-piadiana
L’article Fanafihana mitam-piadiana est apparu en premier sur AoRaha.
Ravan’ireo sambo vahiny mpanjono vaventy ny trondro, ny makamba sy ny maro hafa anatin’ny fari-dranomasin’i Madagasikara. Isan-taona, mihena tsy latsaky ny 1 000 t ny hazandranomasina eto an-toerana, mihena, manaraka izany, koa ny halehibeny, araka ny fanadihadiana ataon’ireo sampana mpikaroka sy mpiaro ny zavaboahary an-tanety sy an-dranomasina, toy ny UICN (1), ny OFB (2).Avy amin’ny mpanjono madinika ny 80 %-n’ny vokatra an-dranomasina ho an’ny tsena anatiny, saingy manomboka tsy msy horaisina izy ireo ankehitriny. Mihena hatrany ny vokatra azon’izy ireo: lakana iray mahazo 15 kg raha be indrindra, raha toa ka nahatratra 35 kg izany tany amin’ny taona 2008. Tsy ahitana vokatra makamba intsony ny haraton’ireo mpanjono madinika ireo; 2 000 – 3 000 t sisa izao ny makamba azon’ireo mpanjono indostrialy eto an-toerana, raha nisy 10 000 t izany tany amin’ny taona 2004.Nampiakatra ny vidiny hatramin’ny 100 % izao fihenam-bokatra amin’ny jono an-dranomasina izao tato anatin’ny dimy taona. Nambaran’ireo mpanangom-bokatra fa be ihany koa ny masonkarena amin’ity fihariana ity, toy ny fitaterana, ny fitahirizana, ny haba isan-karazany. Eto an-dRenivohitra, misondrom-bidy avokoa ny hazandranomasina rehetra, 12 000 -18 000 Ar ny kilao, arakaraka ny karazany; ny makamba, 24 000 Ar ny kilao.Maro ny fanampiana fanohanana ny jono an-dranomasina, anisan’izany avy amin’ny Banky iraisam-pirenena, ny Vondrona eoropeanina, ny firenena alemà, ny COI (Commission de l’océan Indien …). Misy hatrany ny fifanarahana vitan’izy ireo amin’ny minisitera misahana ny jono, antapitrisa dolara maro, saingy miharatsy hatrany ny vokatra raha jerena ny mianjady amin’ireo mpanjono madinika. Mitohy ny jono tsy ara-dalàna, ny fidiran’ireo sambo mpanjono vaventy efa mandeha ho azy. Tsy fantatra raha mbola manana sambo mpiaro morontsiraka isika. R.MathieuUICN (1) : Union internationale pour la conservation de la natureOFB (2): Office français de la biodiversité L’article Jono an-dranomasina: manomboka tsy misy horaisina ny mpanjono madinika a été récupéré chez Newsmada.